नेपालमा पनि यस्ता टिकटक एकाउन्ट बन्द हुने ! - dautarimedia.com
नेपालमा पनि यस्ता टिकटक एकाउन्ट बन्द हुने !
काठमाडौ । नेपालमापनि टिकटक बन्द हुने भएको छ । १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुका झण्डै ७३ लाख एकाउन्ट टिकटकले बन्द गरिदिएको छ । नेपालमापनि उमेर समूहलाई एकदमै भेरिफाई गर्न नेपाल हेर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायलाई टिकटकले भनिसकेको छ । धेरै विकृति आएको भनेर गुनोसो आएपछि साउन १ गतेबाट नेपालमा टिकटक एकाउन्ट बन्द गर्ने प्रस्ताव समेत आएको छ । यो वर्ष सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासिकमा टिकटकले बालबालिकाको भनेर आशंका गरिएको भनिएका लाखौँ एकाउन्ट बन्द गरिदिएको थियो । यो संख्या टिकटकका विश्वव्यापी प्रयोगकर्ताको संख्याको १ प्रतिशत मात्रै हो।
Previous: बिरामी अनिता खड्काको छोरीको पुरा भयो भून्टी खेल्ने सपना,४ बर्षकी नानीको चकित पार्ने अभिनय-भिडियो हेर्नुहोस्
Next: श्रीमान बिदेशमा रहेकी २६ वर्षीया महिला पक्राउ